XOG: Ethopia oo A/Madoobe u gacan gelisay Maamulka Gobolka Gedo xili uu wareegto ku soo magacaabay… |
XOG: Ethopia oo A/Madoobe u gacan gelisay Maamulka Gobolka Gedo xili uu wareegto ku soo magacaabay…
Iyadoo mudaba xaaladu ku xumeyd Madaxweynaha Jubba Axmed Maxamed Islaam Madoobe marka la eego xiriirka uu la lahaa Itoobiyaanka ayaa iminka u muuqda inuu kasoo kabtay taas.
Axmed Madoobe oo xiriir fiican la lahaa Kenyaatiga ayaa tan iyo markii la dhisay maamulka uu madaxd ka yahay ee Juba waxaa dhib ka heystay sidii uu maamulkiisa u gaarsiiin lahaa Gobolka Gedo oo ay maamulayeen siyaasiyiin dhanka Dowlada Soomaaliya u janjeera sida Kaliil iyo Maxamuud sayid Aadan.
Madaama Itoobiyaanku dhinac ka heystaan Gedo waxaa qasab ku noqotay Axmed Madoobe inuu dhankaasi u maro Mar hadii Kenyaatigu awoodin inay Gedo oo dhan gacanta u geliyaan.
Axmed Madoobe ayaa iminka si rasmi ah loogu gacan geliyay Gobolka Gedo markii shir arintaasi ku saabsan dhawaan lagu qabtay Doolow halkaasoo lagu soo shir qoolay siyaasiyiinta diidan siyaasada Axmed Madoobe.
Wareegtadii sedexaad ayaa ka soo baxday Axmed Madoobe taasoo uu xilal ugu magacaabaayo Gobolka Gedo,ugu horeyn wuxuu xilka ka qaaday Kaliil oo Gudoomiye ka ahaa wuxuuna u dhiibay xilkaasi gudoomiyihii hore ee Magaalada Baladxaawo.
Sidoo kale saacadihii ugu danbeeyay wuxuu soo magacaabay Taliyaha ciidamada Gobolka Gedo Cabaas Ibraahim Gurey iyo ku xigeenkiisa Cabdullaahi Cismaan kuwaasoo dhamaantood ka wada tirsan siyaasiyiintii mucaaradka ku aheyd.
Talaabooyinkaan waxay muujinayaan in Axmed Madoobe si rasmi ah awooda Gobolka Gedo ula wareegay waxaana u harsan Gobolka Jubada dhexe halkaasoo ay heystaan xoogaga Alshabaab.